သစ်ပင်နှင့်တူသောမိန်းမ | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
March 17, 2008, 1:32 am Filed under: E-Books, Essays And Stories အခုတစ်လော စာတွေလည်း သိပ်မရေးဖြစ်ဘူး .. ။ စာရေးဖို့ထက် စာဖတ်နေတာပဲများနေတယ် .. ။ စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ရေးနေတဲ့စာတွေက အများကြီးပဲ . ။ လက်ကတော့ ဘာစာမှ မရိုက်ဖြစ်သေးဘူး .. ။ စာဖတ်သူတွေကိုလည်း အားနာသလို တာဝန်တွေပိနေတဲ့ နေ့စဉ်ဝတ္တရားတွေကြားမှာလည်း တစ်ခါတစ်လေတော့ ပြေးထွက်ချင်သား … ။ (၇)ရက်နေ့တွေတိုင်း အမှတ်တရ၀တ္ထုတိုတစ်ခုခု တင်ပေးလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မ အခုလတွေမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဘာဝတ္ထုတိုတစ်ခုမှ မတင်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူး .. ။ အဲဒီဝတ္ထုတိုလေးတွေကို တောင်းဆိုလေ့ရှိတဲ့ မိတ်ဆွေအချို့အတွက် လက်ရှိအဆင်သင့်စာစီထားတဲ့ ၀တ္ထုတိုတစ်ခုကိုပဲ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အမှတ်တရ(၇)ရက်နေ့အကြွေးတွေအားလုံးအဖြစ် ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ ပြန်ဆပ်လိုက်ပါတယ်။ သစ်ပင်နှင့်တူသောမိန်းမ(ဂျူး)
သူမ၏ဆံပင်များမှာ အညိုရောင်လှိုင်းများအဖြစ် ဝေ့ဖွာလျက် နောက်ကျောဆီတွင် ကျနေ၏။ ကျွန်တော်ရှိရာ ခြံဝင်းအပြင်ဘက်သို့ လှမ်းကြည့်လိုက်သော မျက်လုံးများမှာ ယခင်ကလို လောကအပေါ် စူးစမ်းမှု ၊ စိတ်ဝင်စားမှု ၊ အံ့သြမှုများလုံးဝမပါဝင်တော့ပါ။ သူမမျက်ဝန်းများ၏ နက်ရှိုင်းသော အဓိပ္ပါယ်တို့ကို တစ်စုံတစ်ရာက ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပြီ။ ထိုတစ်စုံတစ်ရာသည် ကျွန်တော်တို့မြို့လေးလား ၊ သူမ၏ခင်ပွန်းသည်လား ၊ သူမသာလျှင် သိနိုင်ပေလိမ့်မည်။´အပြည့်အစုံဖတ်ရှုရန် Download Here
March 17, 2008 @ 3:33 pm Reply	လင်းလက်ရေ..ဂျူးဝတ္ထုလေးလာဖတ်သွားပါတယ်
March 18, 2008 @ 10:58 pm Reply	ညီမရေ စီပုံးမတွေ့ လို့ဖိတ်ခဲ့တယ်။….လာပြီနော် ရင်တွင်းဖြစ် ခံစားချက် စစ်စစ်
Comment by ဂျေ
March 19, 2008 @ 9:05 am Reply	ဂျူ ၀တ္ထုတော်တော်များများဖတ်ဖူးပေမဲ ဒီဝတ္တုလေးမဖတ် ဖူးသေးပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
March 21, 2008 @ 2:16 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI